हाम्रो सेवा - Camei Ele & Stationery Co., Ltd.
१. सोधपुछको बारेमा
सबैभन्दा पहिले, यदि तपाइँ हाम्रो कम्पनी द्वारा स्वतन्त्र रूपमा डिजाइन गरिएको उत्पादनहरू छनौट गर्नुहुन्छ भने, हामी तपाइँको बजारमा उत्पादन परीक्षण आवश्यकताहरू र उत्पादन मात्रा अनुसार सबैभन्दा अनुकूल मूल्य प्रदान गर्न सक्छौं। मा)
दोस्रो, ग्राहकहरूलाई सोधपुछ गर्नका लागि तस्बिरहरू/नमूनाहरू उपलब्ध गराउनको लागि, हामीसँग ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उत्पादन उद्धरणको सही गणना गर्न विशेष लेखा कर्मचारीहरू छन्। हामीसँग धेरै कठोर लेखा र लेखा परीक्षण संयन्त्र छ उही दिन उद्धरण उद्धरण गरिनेछ। तलको चित्र जस्तै। त्यसैले, कृपया हाम्रो व्यावसायिक क्षमता र जिम्मेवार मनोवृत्तिमा विश्वास गर्नुहोस्।
२. नमूना बारे
हामीसँग हाम्रो आफ्नै धेरै पेशेवर डिजाइन टोली र प्रूफिंग छ, दुई डिजाइनरहरू १० वर्ष भन्दा बढी उत्पादन डिजाइन अनुभव, टेम्प्लेट खोल्ने मास्टर, चार उत्पादन प्रूफिंगमा संलग्न छन्। हामी 24 घण्टा जति कम मा समाप्त उत्पादन पाउन सक्छौं। र हामी तपाइँको लागि अनुकूलित गर्न सकिन्छ, तर तपाइँको रेखाचित्र अनुसार सही प्रमाणीकरण। तपाईलाई कस्तो प्रकारको प्रिन्ट डिजाइन चाहिन्छ, ढाँचा डिजाइन, शैली डिजाइन चाहिन्छ।